प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार स्थापनाको ३ वर्ष पुग्दैछ । यो अवधिमा ५ नम्बर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको प्रयोजनका लागि भनेर कराडौं मूल्यका गाडी खरिद गरे ।
खरिद गरिएका गाडी बजार मूल्यभन्दा बढीमा किनेको पाइएपछि प्रदेश सरकारलाई भ्रष्टाचारको आरोप समेत लाग्यो । प्रदेश सभाले २ वर्ष अगाडि ११ वटा गाडी खरिद गरेको थियो ।
तिनै महंगा र नयाँ गाडी मर्मत सम्भारका लागि प्रदेश सभाको रकम मनलाग्दी खर्च हुँदै आएको छ । गत २ वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई र चारपांग्रे सवारीसाधन मर्मतसम्भारका लागि धेरै रकम खर्चिएको देखिएको छ ।
प्रदेश सभाले १ वर्षमा १८ वटा कार/जीप, ७ वटा मोटरसाइकल, ५ वटा स्कुटर र २ वटा साइकल मर्मत गरेको छ ।
आव २०७६/०७७ मा गाडी मर्मतका लागि झण्डै आधा करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार १ वर्षमा चारपांग्रे गाडी र मोटरसाइकल/स्कुटर मर्मतमा ४५ लाख १६ हजार ९९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । एउटै गाडी मर्मतमा करीब ८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको प्रदेश सभाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ लाख ९९ हजार र आव २०७५/०७६ मा १५ लाख ८६ हजार मात्र खर्चिएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरिले प्रयोगकर्ताले मर्मत गरेपछि आफूहरूले भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेको बताए । खरिद गरेको २ वर्ष नपुग्दै मर्मतमा मनलाग्दी खर्च गरिएको देखिन्छ । ३ वटा आर्थिक वर्षमा गरी प्रदेश सभामा गाडी मर्मतका लागि ६३ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कसको गाडी मर्मतमा कति खर्च ?
मर्मत गरिएका गाडीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश सभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रयोग गर्ने लु१झ ४५६ नम्बरको टाटा स्टोर्म गाडी लागि झण्डै ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । ढकाल चढ्ने गाडी २०७५ मंसिरमा खरिद भएको हो । उनको गाडी मर्मतमा ७ लाख ८२ हजार १२८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सांसद ढकालले आफ्नै घरमा पार्किङ गरिराखेको अवस्थामा अज्ञात समूहले गाडीमा बम विस्फोट गराएको थियो । गाडी लक्षित गरी प्रहार गरिएको बमले ठूलो क्षति पुगेको उनले बताए । ‘बम प्रहारले गाडी भित्रका सबै सिट जलेका थिए । ढोका, छत र सिट फेर्दा धेरै खर्च निस्कियो । गाडीका ४ वटै पाङ्ग्रा पनि परिवर्तन गरेर नयाँ राखिएकाले खर्च बढी देखिएको हो,’ उनले भने ।
कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव चढ्ने गाडी मर्मतका लागि ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । उनी लु१झ ४४२ नम्बरको टाटा सफारी स्टोर्म जीप चढ्छन् । गाडी मर्मत गर्न १ वर्षमै ३ लाख ८ हजार ९३६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यादवले टाटा गाडीको सर्भिसिङ खर्चिलो हुँदा मर्मत खर्च धेरै आएको बताए । उनको घर बाँके हो । उनले भने, ‘म बुटवल–नेपालगञ्ज, नेपालगञ्ज–बुटवल गर्नुपर्ने भएकाले हालसम्म ७० हजार किलोमिटर गुडेकाले बिग्रेकै कारण मर्मत गर्दा ३ लाख बढी रकम मर्मतमा खर्च उठेको हो ।’
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रयोग गर्ने बा१झ ९७२९ नम्बरको गाडी मर्मतका लागि गत आर्थिक वर्षमा ४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा यो गाडी मर्मतका लागि २ लाख ३७ हजार ५०८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
घर्तीले नै प्रयोग गर्दै आएको अर्को बा१झ १९४८ नम्बरको टाटा स्टोर्म गाडीका लागि पनि गत आर्थिक वर्षमा २ लाख ४५ हजार ११९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यही गाडी मर्मतका लागि २ लाख १३ हजार ४८७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रदेश सभाका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने बा१झ ७१९७ नम्बरको गाडी मर्मतका लागि गत आर्थिक वर्षमा ६ लाख ४९ हजार ९३३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
हेर्नुहोस्, पूरा विवरण :
यति धेरै खर्च कसरी भयो ?
प्रदेश सभाका कर्मचारी नै सवारी मर्मतमा यतिधेरै रकम खर्च भएपछि अचम्ममा परेका छन् । प्रदेश सभाका एक कर्मचारीले भने, ‘खर्च चाहिँ अस्वाभाविक नै हो । हामी पनि यो बारेमा छानबिन गर्दैछौं । कर्मचारी चढ्ने गाडीमा मर्मतमा कति खर्च आयो भन्ने हामीलाई नै जानकारी हुुँदैन ।’ खर्चबारे आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको सचिवालयका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठले बताए ।
मर्मत खर्च कसरी हुन्छ भुक्तानी ?
प्रदेश सभाका समितिका सभापति रहेका दलका नेताहरूले प्रयोग गर्ने गाडी बिग्रियो भने शुरूमा मर्मत गर्ने ग्यारेजमा देखाइन्छ । मर्मतका लागि थोरै खर्च लाग्छ भने प्रदेश सभा सचिवालयले मर्मतका लागि अनुमति दिन्छ । लाखौं लाग्ने भए ३ फरक–फरक कोटेसन माग गरिन्छ । कोटेसन माग भए बमोजिम तुलनात्मक रुपमा कम खर्चमा मर्मत गर्ने ग्यारेजलाई मर्मतको आदेश दिइन्छ ।
गाडी बनेपछि चालकले गाडी निरीक्षण र परीक्षण गरी गाडीको अवस्थाबारे प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रतिवेदन दिन्छन् । प्रतिवेदन आएपछि प्रदेश सभाको प्रशासन शाखाले भुक्तानीको लागि लेखा शाखालाई अनुमति दिएपछि लेखाले मर्मतको भुक्तानी दिने लेखा अधिकृत अग्रहरिले बताए ।
६० सवारीसाधन मर्मत
प्रदेश सभा सचिवालयले ३ वर्षमा ६० वटा सवारीसाधन मर्मत सम्भार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५ वटा मात्र सवारी मर्मत सम्भार गरिएको थियो । ५ वटा गाडी मर्मत गर्दा २ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ । आव २०७५/०७६ मा २३ वटा गाडी मर्मत गर्दा १५ लाख ८६ हजार र आव २०७६/०७७ मा ४५ लाख १६ हजार खर्चिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले जानकारी दिए ।